Ny bilaogin’i Libya: herinandro voalohan’ny taona 2007 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2018 2:22 GMT
Nanoratra momba ny fanapahan-kevitra amin'ny taona vaovao i Khadijateri. “Raha toa ka hanao fanapahan-kevitra aho dia ho lisitra iray manontolo izany- azo antoka mihitsy fa tsy ho ampy ny [fanapahan-kevitra] iray. “
AngloLibyan ihany koa dia mbola tao anatin'ny Taombaovao/fahatsiarovana ny Eid ary nividy hena sy niresaka momba ny afomanga tany Londres.
Miresaka momba ny fifalian'ny fiandrasana zazakely sy ny anjara andraikiny vaovao i Lebeeya . “Zazakely TENA sariaka sy mahira-tsaina i Mohra. Nanontany izay zavatra hafahafa indrindra izy, mampihomehy fa tena mahafatifaty sady tsy mahalala na inona na inona izy. Tena vao mainka nampihomehy kokoa noho ny niheverako azy aza izany. Vetivety dia tapitra ny 2 andro. Malahelo azy sahady aho “.
Miaro ny tombontsoan'ny maha-izy anao manokana i Piccolina “raha toa ka tsy miseho amin'ny maha-ianao anao ianao ary manafi-toetra dia AJANONY ary ALAVIRO AHO “.
Tena gaga tamin'ny diany nankany Tripoli i Besheshentra avy ao Benghazi ao amin'ny Tears in Heaven .